Blockchain समाचार 06.06.2018 - Blockchain समाचार
जुन 6, 2018 व्यवस्थापक
भारतीय प्रहरी वक्ष विशाल गुप्त आधारित Ponzi योजना
को Ponzi एक डा द्वारा धेरै कार्यक्रम शामिल. अमित Lakhanpal, मुद्रा व्यापार सिक्का समूह को सीईओ र Flintstone समूह को सीएमडी. अधिकारीहरु Lakhanpal मुद्रा व्यापार सिक्का भनिने cryptocurrency सृष्टि गर्नुभएको थियो भने (MTC), जसमा उनले भारी अन्य speculative सम्झौताहरू मा लगानीकर्ताले लोभ्याउन क्रममा फराकिलो भारतीय समुदायमा marketed. को Flintstone समूह अचल सम्पत्ति विकास एजेन्सी स्वामित्वमा Orion व्यापार पार्क मा एक कार्यालय हुन भने “ठगी को केन्द्र मा” यी शङ्कास्पद ठगी को बहुमत orchestrating यसको कर्मचारी संग; को सोझो लगानीकर्ताले “बस चार छ महिना मा दस बीस गुना,” टाइम्स भारतीय रिपोर्ट. यो पनि केही लगानीकर्ताले पनि क्यारेबियन नागरिकता प्रतिज्ञा थिए दावी थियो, अचल सम्पत्ति र स्विस बैंक आफ्नो लगानीको लागि विनिमय खाताहरू.
यो समग्र Ponzi सिस्टम कमाएका पैसा को अनुमानित राशि लगभग छ कि अनुमान गरिएको छ 500 करोड, जो equates $ 6,699,450,000.
को बस्ट समयमा, को ठाणे प्रहरी पक्राउ र Taha Kazi पक्राउ, प्रमुख flanking टेक्नीसियन को एक, तर अझै पनि Lakhanpal र चार धोखाधडी को अन्य प्रमुख तथ्याङ्कले लागि देख छ.
को Ponzi दिल्ली गरेको प्रबन्ध निर्देशक Pravin Agarwal देखि उजुरी निम्न स्थानीय अधिकारीहरूले द्वारा कम्पनी कुनै पेआउट प्राप्त गरेपछि छानबीन थियो. प्रहरी अभिषेक Trimukhe को उप प्रमुख भन्नुभयो:
“हामी Chitalsar प्रहरी स्टेशनमा अपराध रेकर्ड, जहाँ defendants एक cryptocurrency सिक्का कारोबार, र धेरै मान्छे धोका।”
त्यस बेला देखि, प्रहरी अब आधिकारिक जारी गर्नुभएको “ठगी को मामला, आपराधिक उल्लंघन, Forgeries र IPC को अन्य सान्दर्भिक क्षेत्रमा, रुचि निवेशक को संरक्षण को लागि महाराष्ट्र व्यवस्था बाहेक, 1999, र पनि सूचना प्रौद्योगिकी ऐन अन्तर्गत”.
जबकि यो Ponzi सिस्टम क्षेत्र प्रभावित कति टाढा अझै अज्ञात छ, दोस्रो छापे Kailas औद्योगिक पार्क मा अर्को कार्यालयमा हुनेछ भनी प्रहरी रिपोर्ट, Vikhroli.
यो दिवालियापन पछि, धेरै अहिले यो घोटाला दुबई बाहिर सञ्चालन एक धेरै ठूलो Ponzi भाग हो भनेर विश्वास. यसलाई हालै Lakhanpal पहिले नै गठन गर्ने उहाँको Highness शेख अहमद बिन Obaid अल Maktoum गरेको क्याबिनेट साथ सहयोगी छ कि रिपोर्ट गरिएको छ “अल पारंगत समूह,” नयाँ दुबई आधारित हीरा-ब्याक गुप्त सुरुवातमा. यो रत्न संग सञ्चय छन् र एक मा-घर विनिमय मार्फत कारोबार गर्न सकिन्छ कि blockchain सम्पत्ति सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ. यसलाई अल Kasir समूह पहिले नै शुरू यसको छ कि अप्ठ्यारो छ “पूर्व प्रारम्भिक Blockchain सम्पत्ति प्रस्ताव” को अल Kasir समूह पोर्टल मार्फत, जो लगानी आकर्षित छ. यो कान्छो गुंडे गर्न आमा Ponzi वास्तवमा छ भनेर दाबी कि, देखेको गर्न रहिरहन्छ.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 05.06.2018
$158एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
वैज्ञानिक अनलाइन ...
अघिल्लो पोस्ट:Blockchain समाचार 05.06.2018
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 07.06.2018